Clyma Weather bụ ngwa ihu igwe ọhụrụ nwere oke okike | Gam akporosis
Mgbe anyị mụtachara banyere Apple dị ka ihe jọgburu onwe ya site na iweghara Ọchịchịrị Sky ma wepu nsụgharị gam akporo na Storelọ Ahịa Play, taa anyị na-eweta ngwa nwere ike ịbụ zuru oke dochie anya, ọ bụghị onye ọzọ karịa Clyma Weather.
ngwa ọ na-eme ịmata ihu igwe nke ga-eme na nke e ji mara ya na ijikọta data sitere na 3 ndị na-enye ọrụ dị iche iche iji nwee amụma ka mma. Ngwa dị ụtọ anyị na-ewetara gị ụbọchị ndị a nke anyị ka na-eju anyị anya na aghụghọ ndị ahụ nke ụlọ ọrụ nke apụl bitten.
1 Ngwa dị mfe yana oke imewe
2 Withgba egwu Clyma Weather: ngwa maka ọdịnihu
Ngwa dị mfe yana oke imewe
Na ọ dị mfe apụtaghị na ngwa ahụ nwere ike ịnwe nnukwu imewe. Ihe na-eme na ngwa a na-akpọ Clyma Weather na nke e mepụtara site na onye mmepụta nke na-ejikarị oge ya na ndị XDA Developers; enweghi ole na ole ngwa ọhụrụ ndị gafere n'akụkụ ndị ahụ Na na anyị na-ezitere gị ka ị bụrụ ihe ọhụụ na ahụmịhe ọhụụ na ọgaranya site na mkpanaka gam akporo gị.
Oge a ọ na-emetụ ngwa ihu igwe nke nwere ike dochie ụzọ ọjọọ Ọchịchịrị Ọchịchị na nke dabara na aka dị egwu nke Apple; ka na-ala azụ iji gam akporo. Clyma ji akụkụ abụọ a kpọtụrụ aha na nke atọ na nnukwu ihe kpatara ya: ọ nwere ike nye ozi di iche na akuko banyere ihu igwe. Ihe nke ato nke a na - abụkarị ihe dị iche n'iji otu na nke ọzọ, ebe a ha amatala ka esi egwu kaadị ha nke ọma iji jikọta data sitere na ndị na - eweta ọrụ atọ.
Ndị ọrụ atọ Clyma Weather na-eji Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, OpenWeatherMap na Weatherbit. Atọ ndị na-enye aha ọma na nke ahụ site na ijikọ ozi ha, anyị nwere amụma ụbọchị ọ bụla maka ụbọchị 7 sochirinụ. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ịka mma n'oge ụbọchị ole na ole sochirinụ, anyị na-akwado ngwa a na anyị ga-akọwa ntakịrị ihe.
Withgba egwu Clyma Weather: ngwa maka ọdịnihu
Anyị na-echeta na Ọchịchịrị Sky ya API ga-akwụsị ịrụ ọrụ, yabụ oge ga-abịa mgbe ngwa a ga-ewe data gị n'aka ndị na-enye gị abụọ. Ọ bụrụ na anyị nwere obere nkwarụ a, anyị nwekwara ọzọ na nke ahụ bụ N'oge a atụghị ya n'asụsụ Spanish. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-ejikọ ya na Bekee, ọ bụ ezie na maka ozi ọ na-enye karịrị akarị, ebe ọ bụ na anyị na-eche ihu na ngwa nke na-ahụ mgbanwe nke oge nke ọma na akara ngosi ya.
Amalitere ihu igwe Clyma, anyị na-eche ihu ihu ihuenyo nke anyị na-ahụ amụma ihu igwe maka ụbọchị 7 na ihu igwe nke oge a nwere data dị ka opekempe na oke okpomọkụ, mmiri ozuzo, iru mmiri, ọwụwa na oge ọdịda anyanwụ. Usoro data a mezue ha na ngalaba nke mbu nwere onyogho bu ihe na egosiputa ubochi nke gha abu, anwu anwu, ya na igwe ojii, mmiri ozuzo na ndi ozo, na okwu di nkpuru okwu nke gesi anyi aka na nchikota izugbe.
Aka nri na amụma izu, ma ọ bụrụ na e nwere a mgbanwe dị mkpa na-akọkwa ya na ederede, ya mere na ihe gbasara sekọnd anyị nwere ike ịmata ezigbo amụma ihu igwe maka ụbọchị ndị ọzọ site na Clyma Weather.
Ugbu a, anyị na-aga na njirimara atụmatụ na nke ahụ abụghị ndị ọzọ isiokwu dị iche iche dịka ọchịchịrị, ọtụtụ wijetị desktọọpụ, na-enweghị mgbasa ozi, ọnọdụ na-akparaghị ókè na atụmatụ ọhụrụ nke ga-abịa na mmelite n'ọdịnihu. Mgbasa mgbasa ozi dị ugbu a na ụdị nnwere onwe anaghị adịcha mma ma bụrụ obere mgbasa ozi n'etiti ngalaba dị iche iche.
otú Clyma Weather ghọrọ ngwa ihu igwe dị mfe ma na-atọ ụtọ maka gam akporo gi. Anyị nwere olile anya na n’oge na-adịghị anya ha ga-enwe ike ịtụgharị ya ma si otu a gakwuru ndị na-ege ya ntị na-adịghị mkpa ịma Bekee ka ha mata ihu igwe dị n’obodo ha. Have nwere ya maka n'efu site na Storelọ Ahịa Play iji nwee ngwa nwere nnukwu okike na ekwentị mkpanaaka gị.
Clyma: Dị Mfe, Ọtụtụ isi iyi na ezi ihu igwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Clyma Weather bụ ngwa ihu igwe ọhụrụ ma dị mfe na-agwakọta data sitere n'aka ndị na-eweta 3
I chefuola ịza ajụjụ maka obere “BIG” nkọwa: ọ na-enye ohere amụma maka ọnọdụ abụọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ebe ọzọ ị ga-azụ ụdị PRO
Zaghachi Jorge Vidal Marco
Xiaomi gọrọ ebubo gbasara ihe nzuzo